‘तितेजिरे–मेरीबास्सै’बाट किन छुटे शैलेन्द्र र मनोज ?
काठमाडौं । हाँस्यब्यंग्य कलाकारले नेताहरु मिल्न नसकेको कुरालाई खुब ब्यंग्य गर्छन् । अरु सामाजिक विषयमाथि पनि उस्तै झटारो हुन्छ । अर्काको आङको जुम्रा देखाएर मात्रै हुँदैन, आफ्नै आङ भैसी पनि कहिलेकाहिँ देख्नुपर्छ । एका...
अब आउने शुक्रबारदेखि दर्शकहरु दुइसातासम्म हाँसेको हाँस्यै गर्न पाउने भएका छन् । चर्चित हास्य कलाकारको प्रस्तुति ‘गाईजात्रा महोत्सव’ २०७१ यही साउन २३ गतेदेखि कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा हुने भएको छ । हास्यव्यङ्ग्यमार्फत समाजका विकृति–विसङ्गति हटाउने र...
गौतमको गुल्मी चिनाउने गीति एल्वम बजारमा
अनिल खत्री गुल्मी, साउन २० । गुल्मी जिल्लाको ऐतिहासिक, धार्मिक, प्रकृतिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको एक गीतको बिमोचन भएको छ । गुल्मी जिल्लाको बलेटक्सारमा जन्मिनु भएका नारद गौतमले रचना गर्नुभएको पर्यटकीय महत्व बोकेको गीत एक कार्यक्रमको...
सुन्दा पनि लाज लाग्ने नेपाली फिल्मको गीत (भिडियोसहित)
काठमाडौं । फिल्म ‘ताण्डव’को अर्काे गीत हो यो । अघिल्लो गीतको आलोचना भएपछि युट्युबबाटै हटाउनु परेको थियो । तर, नयाँ गीत पनि आलोचनामुक्त रहेन । किनकी ‘युद्ध’ नामको उक्त गीतमा यस्ता लाजमर्दा शब्द छन्,...
सेक्सका भोका सेलिब्रेटीहरु…
सेक्स शारीरिक आवश्यकता हो । स्वस्थ शरीरका लागि मात्र नभई स्वस्थ मनका लागि पनि सेक्स आवश्यक रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेका छन् । तर, कतिपयको मनलाई सेक्सले स्वस्थ बनाउनुको सट्टा उल्टो रोगी बनाइदिने गरेको छ...
तेह्र वर्षमैँ ‘पोइला जान्छे’ भन्थे
– सुमी चाम्लिङ राई /गायिका तपाईंको दोस्रो एल्बम ‘जबसम्म’बाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ? धेरैले गीत राम्रो छ भन्नुभएको छ । एफएमका काउन्टडाउनमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेको छ । अघिल्लो एल्बमजस्तै भयो भने त यो...
राजेशपायलका फ्यानः रगतले लेटर लेख्नेदेखि १० वटा आइफोन दिनेसम्म
चर्चित गायक राजेशपायल राईका फ्यान कति होलान् ? फेसबुकको फ्यान पेज १ लाख दुई हजारभन्दा बढीले लाइक गरेका छन्, ट्वीटरमा पनि त्यत्तिकै संख्याले पछ्याइरहेका छन् । राजेश आफैले चारवटा फेसबुक आइडी चलाउछन् र बाँकी...
दुस्मनी छाडेर साथी बने सलमान र शाहरुख
हामी सोच्ने गर्छौं बलिउडका स्टारहरुको कहिलेपनि कसैसँग दुस्मनी हुँदैन भन्ने । तर, हामीले सोचेको जस्तो हुदैन बलिउडका कलाकाहरुको पनि । उनीहरुको पनि निकै ठुलो दुस्मनी हुन्छ, कलाकार कलाकार वीच । त्यस्तै भीडका दुई स्टार...